Zonke iindaba eziza nohlaziyo lwe-1.5 lwePUBG Mobile luzisa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Zonke iindaba eziziswa yi-PUBG Mobile 1.5
UAron Rivas | 10/07/2021 11:39 | Ukuhlaziywa ukuba 10/07/2021 11:41 | Izaziso, PUBG Imfono
Inye uhlaziyo olutsha lwePUBG Mobile, kwaye 1.5. Le iza notshintsho olunomdla, iindaba kunye nokuphuculwa, njengokuncitshiswa kwexesha lokudlula kwedabi kunye nexabiso elifanayo, izixhobo ezitsha, iindlela kunye nemisebenzi, nokunye okuninzi. Sibacacisa ngakumbi kumanqaku epatch.
Zininzi izinto ezintsha zokubona, kodwa apha ngezantsi sishwankathela ezona zibalulekileyo. Ngokufanayo, gcina engqondweni ukuba uhlaziyo ngoku luyafumaneka kwiVenkile yokudlala, Ke ngoku ungazama zonke iindaba ezibandakanyiweyo kumdlalo.
1 Iindlela ezintsha
1.1 Ukutshiswa kwemishini
1.1.1 Utshintsho olupheleleyo
1.1.2 Inkcaso yeMishini yoKhethekileyo yeMidlalo
1.1.3 Imishini eyahlukeneyo yokutshaya imipu kunye nezixhobo
1.1.4 Izithuthi ezitsha zoMsebenzi oMiselweyo
1.1.5 Izinto ezikhethekileyo zoNgcingo zoMsebenzi
1.1.6 Iimpawu ezizodwa zoCinezelo lweMishini
1.1.7 Omnye umxholo omtsha ovela kuCinezelo lweMishini
2 Tesla (Julayi 9-Septemba 6)
2.0.1 I-Tesla Gigafactory
2.0.2 Imodeli Y kunye nokuqhuba ngokuzimela
2.0.3 I-Tesla Semi
3 Imipu emitsha kunye nokuphuculwa kokulwa
3.1 Umpu omtsha weMG3
3.2 Uhlengahlengiso kwi-M249
3.3 Intlawulo yenkqubo yokubuyisa umlilo
3.4 Useto lwembonakalo yekhamera yomntu wesithathu
3.5 Iifestile ezintsha zeglasi
3.6 Uphuculo kumgaqo wolawulo olungagqibekanga
3.7 Ukufa kweQela: Ukuphuculwa kweHangar
3.8 Uhlengahlengiso kwi-EvoGround-Payload 2.0
3.9 Ivili elitsha elikhawulezayo
3.10 Izinto ezilahlwayo ezintsha ezilahlwayo
3.11 Indawo eNtsha yoloyiso
3.12 Utshintsho olutsha
3.13 Isalathisi esitsha se-ammo esisele
3.14 Ukufa kwakhona kwedatha kwesikrini esitsha
3.15 Useto lweMpu yesiqhelo
3.16 Ulwenziwo olukhethekileyo lokuziva ngemipu
3.17 Izaziso zokuthatha inxaxheba kwiqela elitsha
4 Ukuphumelela kwedabi
6 URay ulapha!
7 Impumelelo entsha
8 Isipho se-RP
9 Ukuphuculwa kokusebenza okusisiseko
10 Ukuphuculwa kwendawo yokhuseleko
11 Ukuphuculwa kwezokhuseleko
12 Ukuphuculwa kobuntshatsheli kuzo zonke iitalente
13 Uphuculo lwento
14 Ukuphuculwa kwenkqubo
15 Umjikelo 1 Ixesha 1
15.1 Inkqubo yenqaku lomngeni
16 Ukuphuculwa kwenqanaba le icon
17 Uhlaziyo lwekhusi lonyaka
18 Ukuphuculwa kwemivuzo yamaxesha athile
Iya kufumaneka ukusuka ngoJulayi 9 ukuya kuSeptemba 6. Kule meko, inkampani yamandla kunye netekhnoloji i-DynaHex iyaqhubeka "notshintsho lwetekhnoloji yexesha elide" e-Erangel.
IDynaHex iguqule imimandla emithandathu ephambili ye-Erangel esekwe kukhuselo lomkhosi, ukusetyenziswa kwamandla, ukuthuthwa kwempahla kunye nolungiselelo, kunye nokusika uphando lwezenzululwazi.
Iziko lezoThutho (elalisakuba yiPochinki)
IPochinki sisiseko senethiwekhi yothutho ye-Erangel kwaye ngoku iye yaba liziko lokuhamba lesiqithi.
Izibuko laseGeorgopol (eyayisakuba yiGeorgopol)
Izibonelelo zikaGeorgopol njengezibuko lezinto ezisetyenziswayo ziya kuphinda zixhatshazwe ngokwaziswa kweziko elitsha lokuyalela kunye nendawo yokugcina izinto ezenzekelayo.
Tech Centre (eyayisakuba sisikolo)
Indawo yangaphambili yesikolo ngoku ibeka ugxininiso olukhulu ekuphenyweni kwezemfundo kunye nokuhlola.
IZiko lezoKhuseleko (elalisakuba liSebe loMkhosi)
Isiseko sezomkhosi sinoxanduva lokujonga ukhuseleko lwesiqithi sonke kunye nokubonelela ngenkxaso yezixhobo.
I-Arhente yoLungiselelo (eyayisakuba yiYasnaya Polyana)
I-Arhente yoLungiselelo ibekwe eYasnaya Polyana kwaye liziko eliphambili lokuhambisa izinto ezifika e-Erangel.
IZiko lezaMandla (elalisakuba nguMandla weMylta)
Lo mbutho uxhobisa yonke i-Erangel kwaye udibanisa ukuveliswa kwamandla okuqhelekileyo kunye netekhnoloji ye-state-of-art ukuvelisa unikezelo oluzinzileyo lwezakhiwo zoluntu kunye nezomkhosi kwesi siqithi.
Inkcaso yeMishini yoKhethekileyo yeMidlalo
Iilifti, iingcango ezizenzekelayo kunye namanye amaqonga ahambayo aya kuvela kwindawo ephuculiweyo yedolophu.
Ukwenza uhambo lusebenze ngakumbi e-Erangel, i-Arhente yoLungiselelo iseke iiHyperLines e-Erangel ukudibanisa izixeko ezahlukahlukeneyo kwesi siqithi.
IZiko loLawulo lisifakile esi sixhobo sothutho sikhethekileyo ngaphandle kwemimandla ethile yasezidolophini kunye neziseko zokunceda abasebenzi bezokhuseleko ukuba bahambe emoyeni kwaye baqhube ukujikeleza esibhakabhakeni.
Imishini eyahlukeneyo yokutshaya imipu kunye nezixhobo
Umpu omtsha: ASM Abakan
I-ASM Abakan imililo ye-5,56mm kwaye ineendlela ezintathu zokudubula: i-othomathikhi epheleleyo, yadubula kabini, kunye nompu omnye.
Iziqhoboshelo zokubambelela zinokuphucula kakhulu ukuphatha umpu, ukuphucula ulawulo lokucoca ngokuthe nkqo / ngokuthe tye, kunye nokubuyisa isantya kwakhona.
Esi sinamathiselo somlomo sinokunciphisa ngokufanelekileyo ukusasazeka kweembumbulu kunye nolawulo lokuphindaphinda.
Esi sixhobo semagazini sinokufakwa kuzo zonke izibhamu kwaye sonyusa kakhulu umthamo wamaphephancwadi ngexabiso lokuphinda ulayishe ixesha elincinci.
Izithuthi ezitsha zoMsebenzi oMiselweyo
I-antigravity amphibious isithuthuthu inezihlalo ze-2 kwaye inokusetyenziselwa ukuhamba kamnandi kuyo yonke imephu.
Izinto ezikhethekileyo zoNgcingo zoMsebenzi
Icebo lokumakisha lobuchule
Eli nqaku liqhubela phambili kwezobuchwephesha kwimidlalo. Nje ukuba ixhotyisiwe, iphawula ngokuzenzekelayo indawo yeentshaba ezibethiweyo kwaye ikwabonisa imeko yeqela labo kwi-minimap xa bethatha inxaxheba.
Thepha ukuze usebenzise ikhaka eliqinisekileyo lokuthintela zonke iimbumbulu.
Iimpawu ezizodwa zoCinezelo lweMishini
Umboniso weHolographic weSpawn Island
Isikrini seholographic siye saziswa eSpawn Island, sibonisa imephu kunye nendlela yokubhabha yomdlalo wangoku, kunye nokumakisha okwenziwe ngabadlali.
Ngexesha lokuhamba ngenqwelomoya kunye nokutsiba izigaba, abadlali banokucofa ngokuthe ngqo kwimephu ukubeka amanqaku.
Abadlali baya kuba nakho ukwenza ngokuzenzekelayo iparashute kwindawo ephawuliweyo emva kokuba inqaku lenziwe.
Omnye umxholo omtsha ovela kuCinezelo lweMishini
Yongeza oopopayi beenqwelomoya kwimijukujelwa ngaphambi kokuba iqhume kwi-airstrikes ukwenza ukuba kube lula ukugweba apho baya kuqhuma khona.
Yongeze inqaku lesalathiso ukubonisa indawo ekuqikelelwa kuyo iziqhushumbisi eziza kuqhuma kufutshane nabadlali.
Tesla (Julayi 9-Septemba 6)
Umnyhadala oza kubakho ngqo ukusukela nge-9 kaJulayi ukuya kuSeptemba 6.
I-Tesla Gigafactory iya kuvela kwimephu. Flip konke ukutshintsha kwimigca yendibano kumzi-mveliso ukuqala inkqubo yokudibanisa imoto kunye nokwakha isithuthi seTesla- Imodeli Y.
Imodeli Y kunye nokuqhuba ngokuzimela
Iimoto ezizimeleyo eziveliswe kwiTesla Gigafactory zinemowudi ye-autopilot enokuthi yenziwe isebenze ezindleleni kwimephu ukuze izise ngokuzenzekelayo abadlali kwindawo yokumakisha kwangaphambili kwindlela.
Ezi zithuthi zothutho zizimeleyo eziphuhliswe nguTesla ziya kuvela ngokungacwangciswanga ecaleni kwendlela endle kwaye ziya kuqhuba ngokuzenzekelayo kwiindlela ezithile.
Fumana izixhobo zokulwa ngokujongana nomonakalo kwiSemi ukuwisa iiKreyithi zokuNikezela.
Imipu emitsha kunye nokuphuculwa kokulwa
Umpu omtsha weMG3
Umatshini omtsha wokukhanya we-MG3: Ngomjikelo we-7,62mm, esi sixhobo sibonisa indlela yokudubula enye, kwaye inqanaba lomlilo linokuhlengahlengiswa ngokulula ukuya kwi-660 okanye i-990 imijikelezo ngomzuzu, ukuvumela ukudubula okuzinzileyo okuqhubekayo kunye nokutshiza ngokukhawuleza.
Xa isetyenziswe nge-bipod, ukubuyela kwayo kuncitshiswe kakhulu ngelixa kudubula. Umpu uvela kuphela kwii-Air Drops.
Ngoku ukuba i-MG3 yongezwa kwi-airdrops, i-M249 izakususwa kwi-airdrops kwaye izakuvela emhlabeni ngaphesheya kwemephu kwimowudi yeklasikhi.
Intlawulo yenkqubo yokubuyisa umlilo
Yongeze inkqubo emanyanisiweyo yemipu enamaqondo ahlukeneyo esakhelo ukusombulula ingxaki yamaxabiso omlilo angahambelaniyo xa amaxabiso esakhelo ahlukile.
Useto lwembonakalo yekhamera yomntu wesithathu
Yongeze ukhetho lokuhlengahlengisa indawo yokujonga ye-TPP.
Indawo ye-TPP yokujonga inokuhlengahlengiswa kuseto.
Olu khetho aluyi kusebenza kwezinye izixhobo ezinesikrini esele sinendawo enkulu yokujonga.
Iifestile ezintsha zeglasi
Iglasi yongezwa kwezinye izakhiwo e-Erangel nase Miramar.
Iglasi inokuqhekeka ngenxa yohlaselo lwe-melee, ukudubula, okanye ukunyuka ngeefestile, kwaye iya kwenza ingxolo xa iphulwe, kodwa ayizukubuyiselwa emva kokuba yaphukile.
Uphuculo kumgaqo wolawulo olungagqibekanga
Ukuthathwa okuzenzekelayo kuya kukhubazeka xa umlinganiswa esebenzisa amayeza.
Ukuba isixhobo se-melee sithathwa xa umlinganiswa sele enesixhobo sokuqala, isixhobo se-melee siya kugcinwa ngokungagqibekanga.
Xa umlinganiswa engenasonka, umlinganiswa uya kuqokelela ngokuzenzekelayo kwaye axhobise isonka.
Ukuba iimbumbulu zemipu ziphelile (kubandakanya iimbumbulu ezingasetyenziswanga) kwaye kukho esinye isixhobo esineembumbulu, umlinganiswa uya kutshintsha ngokuzenzekelayo asebenzise esi sixhobo.
Imipu evuthayo engenayo i-ammo ayizukuzenzekelayo.
Ukufa kweQela: Ukuphuculwa kweHangar
Ukuphucula ukugubungela kufutshane ne-spawn point of the house to be phantse ibe phezulu njengendawo ephezulu yeziqhamo.
Ukuphucula ubungakanani besinciphiso ukwenza kube lula ukubona imeko yedabi.
Uhlengahlengiso kwi-EvoGround-Payload 2.0
I-Tencent ithe izakuqhubela phambili i-EvoGound -Payload 2.0 ukuyenza ibengcono kunangaphambili kuwo wonke umntu.
Ivili elitsha elikhawulezayo
Iivili ezitsha ezisetyenziswayo nezilahlwayo ziye zongezwa ukulungiselela ukusetyenziswa kwezinto ezinokusetyenziswa / ezilahlwayo.
Slayida izinto ezinokusetyenziswa / ezilahlwayo ukuvula ivili kunye nokutshintsha okanye ukusebenzisa izinto.
Unokwenza umsebenzi wokuPhosa ngokukhawuleza kwimenyu yokuseta. Emva kokuyenza isebenze, cofa ubambe i icon enokuLayiseka ukuze uyisebenzise ngokukhawuleza.
Unokwenza umsebenzi wokuPhosa kwevili eliKhawulezayo kwimenyu yokuseta. Emva kokuyivumela, qengqa ivili kwaye ukhethe ngokukhawuleza ithagethi enokuLayishwa ukuze wenze uKwazisa ngokukhawuleza.
Izinto ezilahlwayo ezintsha ezilahlwayo
Abadlali banokulahla iziyobisi abaziphetheyo-ezingenanto ngohlobo lweephakeji. Amayeza alahliweyo anokuqokelelwa.
Indawo eNtsha yoloyiso
Emva kokuphumelela, ungabiza umfanekiso oqingqiweyo ukubhiyozela.
I-MVP yeqela eliphumeleleyo linokubiza umfanekiso ophumeleleyo kwindawo ethile.
Iimpawu ezikhethekileyo zoMthendeleko zinokusetyenziswa kufutshane nomfanekiso woloyiso.
Emva kokuphumelela kwimodi yeklasikhi, ungangena iMowudi yeFoto.
Unokukhetha ukufihla okanye ubonise ulwazi lomlingane kwimowudi yefoto.
Unokwabelana ngeefoto zakho emva kokuzithatha.
Isalathisi esitsha se-ammo esisele
Nanini na xa iphephancwadi liphantse lingenanto, inani elibonisa iimbumbulu ezishiyekileyo liya kutshintsha umbala:
Xa une-25% ye-ammo eseleyo, inani liya kuba tyheli.
Xa ushiye i-10 yepesenti ye-ammo, inani liya kubomvu.
Ukufa kwakhona kwedatha kwesikrini esitsha
Xa udlala Ukufa kwakhona, ngoku ungabona ulwazi loluntu malunga nomdlali osusileyo.
Kwidatha, ngoku kunokwenzeka ukubona idatha ehambelana nokuchaneka kokudubula, kubandakanya ukuba umdlali ubethe kangaphi umdlali welinye iqela, kunye nokuba umchaphazele kangaphi umdlali.
Umsebenzi wengxelo wongezwa.
Ukufa kwakhona xa kunikwa amandla kunokwenziwa okanye kukhutshazwe kuseto.
Useto lweMpu yesiqhelo
Abadlali ungenza ngokusesikweni izincedisi umpu ngamnye kwaye usete izincedisi ezahlukeneyo ekujoliswe kwiindawo zokubeka ezahlukeneyo.
Nje ukuba useto luqwalaselwe, umlinganiswa uya kuqokelela ngokuzenzekelayo kwaye axhobise ezi zinto zoncedo xa ezifumana.
Ulwenziwo olukhethekileyo lokuziva ngemipu
Abadlali banokumisela useto lobuntununtunu bompu ngamnye, oya kuthi usetyenziswe xa usebenzisa imipu ehambelana nayo.
Izaziso zokuthatha inxaxheba kwiqela elitsha
Xa umdlali weqela lakhe esedabini kwaye ethatha umonakalo, kuya kuvela isaziso ejikeleze ibha yezempilo yeqela lakhe ukubonisa ukuba bakumlo.
Ukuhamba kukaRoyale ngeli xesha kujongana notshintsho olukhulu, kuba kuya kubakho ababini kulo lonke ixesha lokudlala. Zezi:
Inyanga yokuphela kukaRoyale: Tek Era (Julayi 14 ukuya ku-Agasti 12)
Inyanga yokuphela kukaRoyale: IProjekthi T (Agasti 13 ukuya kuSeptemba 13)
Emva kokuphela kwe-RP S19, iRoyale Pass iya kulungelelaniswa nenyanga yeRoyale Pass, kwaye abadlali banokubanga isipho sokwamkelwa esikhethekileyo emva kokufikelela okokuqala.
Useto lwexesha: Ukulungiswa kwexesha le-RP kwinyanga enye, kwaye i-2 RP iya kukhutshwa ngokulandelelana kuguqulelo ngalunye. I-RP M1 kunye ne-RP M2 ziya kukhutshwa kolu hlobo.
Uhlengahlengiso lwamaxabiso: Kulungelelaniswe ixabiso eliqhelekileyo le-RP ukuya kwi-360 CU kunye nexabiso le-Elite RP ukuya kuma-960 CU (amanqaku ebhonasi ayi-1200).
Ukunciphisa uluhlu: ihlengahlengiso lenqanaba eliphezulu ukuya kuma-50 ngaphandle kokutshintsha umgangatho wembuyekezo. Fikelela kwiNqanaba 50 ukuze ufumane useto lweentsomi kwaye ufumane uMipu oQhelekileyo kunye neSeti kwiNqanaba 1.
Imivuzo eyongezelelweyo: Abadlali banokufumana imivuzo yasimahla logama nje befumana amanqanaba eRP.
Useto loMsebenzi: Ukunciphisa ixesha lokuthunywa kwe-RP Challenge ukusuka kwiiveki ezi-8 ukuya kwiiveki ezi-4, ukunciphisa iimfuno zokudlala ze-RP ngaxeshanye.
Olunye uhlengahlengiso: Ukulungiswa kwexabiso lelayisensi ye-EZ, kongezwe ithebhu yenyanga yeRoyale Pass, njl.
Ukuzisa iClan Battle, imo apho iintsapho zohlobo olufanayo kunye nenqanaba lomsebenzi wedabi zilwa kwidabi leentsuku ezili-14.
Amalungu eClan anokugqibezela iiNkqokonqoko zeDabi ukuze afumane iiNqaku zoKothusa kunye nomvuzo osisiseko wemihla ngemihla.
Phambi kokuba umcimbi uphele, usapho oluneyona mivuzo isisiseko luphumelele umlo weli xesha lonyaka.
Zombini uloyiso lwendlu kunye negalelo lomntu ngamnye zivelisa amabhaso amahle.
Inqaku elitsha, uRay ulapha ukuze akugcine uhlaziyiwe kuzo zonke izinto ezibalulekileyo.
Impumelelo yomxholo omtsha: Ukubona kukukholelwa (okukhethekileyo), kufumaneka ngokuthatha inxaxheba kwi-Ignition ye-Mission kunye nokuhlangabezana neemfuno zokuphumelela ukusuka nge-6 kaJulayi ukuya kuSeptemba 6.
Impumelelo entsha: Umlindi weXesha (okhethekileyo), ofumaneka ngaphambi kukaSeptemba 13 ngelixa wayekhona xa ixesha leRoyale Pass liqhubeka notshintsho.
Impumelelo entsha: Ukunyamezela, okunokufunyanwa ngokuthatha inxaxheba kwi-All Talent Weekly Championship.
Impumelelo entsha: Ayinakuphikiswa, enokufunyanwa ngokufumana imbeko ye-RP kumdlalo.
Impumelelo entsha: Kubalulekile, enokufunyanwa ngokugcwalisa umdlalo kunye nokulinganisa umlingane.
Cwangcisa impumelelo kwiNkwenkwezi kunye neNeon Punk ziya kubuya ixesha elimiselweyo, eliza kususwa ngonaphakade.
I-RP Perk entsha: ukukwazi ukubonisa intlonipho kumdlalo. Abadlali banokuhlonipha umntu abadlala naye nanini na ngexesha lomdlalo, kwaye umyalezo wentlonipho uya kuboniswa kwimbali yengxoxo.
Abadlali abafumene imbeko banokufumana isixa esithile samanqaku e-RP.
Ukuphuculwa kokusebenza okusisiseko
Inkxaso ye-IBL kunye nezincedisi ukubonelela ngeziphumo zokukhanyisa ezizizo kwiimephu kunye nokuphucula umahluko phakathi koburhabaxa.
Inkxaso yokusasazeka kokukhanya esibhakabhakeni, kubandakanya ukusasazeka kukaRayleigh, ukusasazeka kwe-Mie, inkungu yomoya kunye nezinye iziphumo, ukwenza isibhakabhaka sicace ngakumbi kwaye siyinyani.
Inkxaso yeziphumo eziluhlaza eziluhlaza, amafu aguqukayo, iziphumo ezibonakalayo zokukhanya kwelifu, njl.
Ukuphuculwa kwendawo yokhuseleko
I-Tencent yongeze umxholo womsitho onomdla kunye nembuyekezo enkulu kuMmandla woKhuseleko -Ukuphononongwa kweVidiyo, kunye nokuphucula ngakumbi inkqubo yokuphononongwa kwevidiyo kunye namava okusebenza.
Yongeze isikrini somnyhadala ukwenza kube lula ukukhangela umxholo womnyhadala.
Umnyhadala wokugaya abantu: Imivuzo ekhethekileyo inokuqokelelwa xa kukho inani elithile labavavanyi bevidiyo.
Ukuphononongwa kweMihla ngemihla: abavavanyi bevidiyo banokuvula uthotho lwemishini yokuhlola kwaye baqokelele umvuzo.
Imivuzo eyongezelelekileyo esisigxina, enjengokunxiba okusisigxina, iifreyimu ze-avatar, njl.
Ukuphuculwa kwesicwangciso-qhinga ngakumbi ekujoliseni istunt sokususa ingca, ukungabinakho ukubuyela kwimeko yesiqhelo, umbono weX-reyi, injongo yemoto, kunye nokuhamba ngokukhawuleza.
Imizamo eyandisiweyo yokuthintela ukonakala kwezixhobo ezahlukeneyo.
Qhubeka ukomeleza ukhuselo lwakho ngokuchasene nohlaselo lwenethiwekhi.
Ukuphuculwa kobuntshatsheli kuzo zonke iitalente
Ukwahlulahlulwa kwamanqanaba emimandla
Amanqanaba emimandla asandula ukongezwa azimeleyo kwinqanaba le-All-Talent Championship.
Abadlali abathatha inxaxheba kumdlalo omncinci ngeveki nganye baya kubekwa kwindawo yabo kule veki.
Amaqela aya kungena kwindawo yebhodi yabaphambili engacwangciswanga emva kokuba egqibile umdlalo. Uluhlu lwommandla ngamnye luzimeleyo.
Emva koMdlalo weVeki ophela veki nganye, abadlali banokuqokelela imivuzo ngokwamanqanaba eqela labo kwingingqi yabo kuloo veki.
Abadlali banokubanga umvuzo womdlalo osebenzayo ngokusekwe kwinani lemidlalo abayidlalayo kwimidlalo yovavanyo veki nganye.
Idatha yokubeka inqanaba lomdlalo weveki kunye nomvuzo wokufaneleka kuyahlaziywa qho ngeveki.
Izihloko ezitsha kunye nempumelelo zongezwa kwi-All-Talent Championship.
Ukuphuculwa kophawu lwendalo iphela
Kancinci uhlengahlengiso lokuqhuba kwevili. Ubambo kunye nesitayile zihlala zifana nevili lelizwi.
Ukuphuculwa kwamaxesha okuphumelela
Ukuhlengahlengiswa kwexesha abadlali banokuhlala emfazweni emva kokuphumelela kwimizuzwana engama-60.
Useto lwe-UI yemfazwe
Ukulungelelanisa isitayile esisezantsi samaqhosha athile omsebenzi. Yenza uhlengahlengiso oluncinci kulwakhiwo olungagqibekanga lweeSeto, iLizwi, iGraffiti, kunye namaqhosha e-Emote.
Ikhreyithi yokufa ibonisa ukuphuculwa kwengcinga
Xa abadlali beqokelela ibhokisi yokufa yomnye umdlali kumdlalo, emva kwegridi yesikwere esine-isikwere kunye nefomathi yegridi yesikwere esithoba yebhokisi itshintshile, oku kuyakukhunjulwa ukuze kungafuneki ukuba ziphinde zitshintshwe.
Abadlali banokwenza ngokwezifiso uvakalelo lwe-gyroscope xa bejolise kwizixhobo.
Wongeze umtshini wokufaka inversion kwi-gyroscope. Nje ukuba olu seto lwenziwe ukuba lube phezulu / ezantsi kwi-gyro.
Iifayile ze-90 ngoku ziyafumaneka kwimizobo egudileyo yezixhobo ezitsha.
Ukuphuculwa kwebhanile yeebhendi
Isibhengezo kwikona ephezulu ngasekunene kweLobby ngoku sinokutyibilika kwizantya ezahlukeneyo kuhlaziyo olutsha lwe-1.5.
Isikrini apho imivuzo iziswa kuwe siphuculwe. Isiphumo sokuphela kweqhosha songezwa ukuthintela abasebenzisi ekucofeni ngokukhawuleza kwaye ngengozi beqa iscreen.
Uvavanyo lokulwa luphuculwe. Abadlali banokunika amanqaku, khetha iithegi, kwaye banike ingxelo yomdlalo kubahlobo babo.
Ukuphucula ulwazi kwiscreen esikhulu
Abanye abadlali babenengxaki yokuqonda ujongano lweqela eliphambili lesikrini kuba alibonisanga lwazi nge-intuitive. Oku sele kulungisiwe.
Igalelo kwimisebenzi yeZithuthi kunye ne-X-Suit ihlengahlengisiwe.
Ukuphuculwa komdlalo ukuthanda ukuthandwa
Ukuthandwa ekuqaleni komdlalo okanye xa uphumelele ubonakalisa inkqubela phambili yokuthanda kweqela kunye nesiphumo esikhethekileyo sokuthanda.
Umjikelo 1 Ixesha 1
Inkqubo yenqaku lomngeni
Inkqubo yenqaku lomceli mngeni lolunye uluhlu lwemithetho esetyenziselwa ukuvavanya isenzo somdlali kwimidlalo ngaphandle kokutshintsha imigaqo yoqobo yokufumana amanqaku.
Fumana amanqaku omceli mngeni webhonasi ukuba awuyeki umdlalo, ulahlekelwe, okanye ushenxise abadlali beqela lakho kumdlalo opheleleyo.
Ukuba abadlali baphulukana nomdlalo ngelixa benamaNqaku oMngeni, baya kuphulukana namanqaku ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwinqanaba labo.
Amanqaku omngeni ongezelelweyo anikezelwa ngokugqibezela umdlalo wokuqala wosuku ngalunye.
Amanqaku ocelomngeni awanakuqokelelwa kwakuba kufikelelwe kwelona xabiso liphezulu.
Amanqaku ocelomngeni abalwa ngokwahlukeneyo ngokuxhomekeke kwiserver kunye nemowudi yomdlalo.
Amanqaku ocelomngeni awazukuqhubeka ngamanye amaxesha onyaka.
Ukuphuculwa kwenqanaba le icon
Ukuboniswa kweempawu zenqanaba kuhlaziyiwe ukuze kunatyiswe iinkcukacha zazo.
Iphucula iziphumo zokuphucula inqanaba.
Uhlaziyo lwekhusi lonyaka
Ulwazi oluboniswe kwiscreen seXesha luhlengahlengisiwe.
Imigca yokukhula komvuzo kunye nenkqubela phambili yomhlobo kongezwe.
Kuhlengahlengiswe indlela yokunikezelwa kwemivuzo.
Iinkcukacha zomvuzo isikrini sihlaziyiwe.
Ukuphuculwa kwemivuzo yamaxesha athile
Amanqanaba esiliva amabhaso ongezwe kuhlaziyo.
Ukongezwa kwemivuzo ye-Ace tier emva kokwahlulahlula i-tier.
Ukonyusa inani lemivuzo yamanqanaba amancinci.
Yahlula-hlula inqanaba le-Ace ngokwamanqanaba athile.
Imivuzo eyongeziweyo kunye nokukhetha ngokwabelana ngokwamanqanaba ohluleyo kwinqanaba le-Ace.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Zonke iindaba eziziswa yi-PUBG Mobile 1.5
Ezona zicelo zintathu zibalaseleyo zokukhutshelwa kwisandi ukuya kwisicatshulwa
Iimidlalo ezi-6 eziphambili ze-ping pong ze-Android